Sida Loo Dhejiyo Ukunta - Show Sugar Geek Show - Farsamooyinka Cunnada
Sidee Udiida Ukunta
Mararka qaar cunto karintu waxay ku baaqeysaa ukun aan bislayn sida tayda subag macaan ama barafka boqortooyada . Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad uumiso ukuntaada aan la karin kahor intaadan isticmaalin si aad uyareeyso fursadaha jirada cunada.
waxa ku soo dhacaya netflix bisha febraayo 2019
Waxaad ka iibsan kartaa ukun cad oo la kariyey inta badan dukaamada raashinka. Ukunta ukunta la dhadhamiyey waxay ku timaaddaa kartoon, badanaa aagga aad ka iibsan lahayd ukunta caadiga ah. Ereyga 'la dubay' waa hal sanduuqa laakiin mararka qaar aad ayuu u yar yahay oo ay adag tahay in la helo. Ha walwelin, haddii ukunta cadaanku ay ku jiraan sanduuq markaa si aamin ah ayaa loo qaadan karaa inay horey ujireen.
Iibsashada ukunta la kariyey (Mareykanka) waa ka qaalisan tahay iibsashada ukunta caadiga ah sidaa darteed waxay noqon kartaa mid qiimo jaban isla markaana ku haboon inaad ukuntaada ku darsato gurigaaga.
SIDEE LOO DHAQAALAYAA DHULKA
Haddii aadan heli karin ukun cad ah oo la kariyey markaa adigu waad isku dhejin kartaa adigu! Cunto-kariyeyaashu waxay ukumiyaan ukumo u gaar ah mar walba makhaayadaha. Si ukunta loo miiro, yokku waa inuu gaaraa heer kul heerkiisu dhan yahay 138ºF. Ha walwelin, ukunta ayaa ku fidi doonta heerkulka mich ka sareeya sidaa darteed uma karineysid ukuntaada inta aad u fiirsato heerkulka si taxaddar leh.
Ukunta la kariyey waxay wali yeelan doontaa isku ekaanshaha ukunta ceyriinka ah waxaana lagu keydin karaa qaboojiyaha ka dib marka la kariyo. Iyaga ayaa loo isticmaali karaa sida ugxan kasta oo kale markaa haddii aad u baahato kaliya kuwa cad, waad kala sooci kartaa ukunnada ukunta iyo kuwa cad oo waxaad yeelan kartaa ukun cad oo la dubay.
TALLAABADA 1 - Ukunta aad rabto inaad ku shiisid ku shub digsi dhexdhexaad ah oo lakab xitaa ah. Ku dabool biyo si ay ukunta ugu jiraan 1 water oo biyo ah. Kadib ukuntaada ka saar. Uma baahnid iyaga inay halkaas ku jiraan ilaa biyahaagu ay ku jiraan jawiga saxda ah.
TALLAABADA 2 - Kulayl biyaha ilaa 140ºF adoo isticmaalaya heerkulbeeg si loola socdo heerkulka. Wax kasta oo ka kulul 142ºF waxaadna kari doontaa ukuntaada.
Talo bixin - Haddii aad leedahay Sous Vide, nidaamkani si aan caadi ahayn buu u fudud yahay maxaa yeelay sous-ka ayaa biyaha ku hayn doona heerkulka saxda ah ee aad u baahan tahay. Si aad ukunta ugu daaqdo adoo isticmaalaya Sous Vide, heerkulka ka dhig 135ºF una oggolow inay wax kariyaan 75 daqiiqo. Heer-kulkaan hoose ayaa ka dhigaya borotiinka ukunta midab cad inuu sii ahaado waqtiga dheereynta ee dheerna wuxuu sii yareeyaa halista cudurada.
TALLAABADA 3 - Ukuntaada (heerkulka qolka) u saar biyaha. Ukunta kuleyli ilaa 3 1/2 daqiiqo. Hubso in heerkulka biyuhu aanu marna ka sarrayn 142 orF haddii kale waxaad kari doontaa ukuntaada.
FIIRO GAAR AH: Waqtiyadan iyo heer kulka waxay ku saleysan yihiin talooyinka Buugga Ukunta Dhirta ee Ukunta .
ma ku ridaa strawberries qaboojiyaha
TALLAABADA 4 - Ukuntaada la kariyey ku wareeji baaquli biyo qabow si aad u joojiso habka kululaynta. Kadib ku keydi qaboojiyaha si aad hadhow u istcimaalaan! Waa intaas!
Haddii aad ka dubayso ukumo aad u waaweyn digaaggaaga markaa kuleylka 5 daqiiqo halkii aad ka ahaan lahayd 3.
FIIRO GAAR AH: Waxaa lagula talinayaa haweenka uurka leh inaysan cunin ukunta karsan. Waxaad ka akhrisan kartaa wax dheeraad ah oo ku saabsan badbaadada ukunta halkan.
Halista in laga helo salmonella ugxanta ceyriin waa qiyaastii 1dii kun 20,000.
Tani maahan hab 100% la hubo oo looga saarayo dhammaan halista cudurada, laakiin haddii sida saxda ah loo sameeyo waxay yaraynaysaa halista.
waxa ku jira netflix bishaan
Sida loogu ukumo ukuntaada guriga si loo yareeyo halista cudurada ka dhasha cunnada. Dhejinta ukunta waa wax fudud oo kaliya waxay qaadataa 3 daqiiqo! Ukunta la kariyey waxaa loo isticmaali karaa sida ukunta caadiga ah. Waqtiga Diyaarinta:5 daqiiqado Waqtiga karinta:3 daqiiqado qaboojinta:5 daqiiqado Wadarta Waqtiga:13 daqiiqado Kalori:72kcal
▢6 weyn (300 g) ukunta heerkulka qolka
▢6 koobabka (1419 g) biyo ama ku filan in lagu daboolo ukunta dheriga ku jira
▢Suugada Cabbirka Dhexdhexaad ah
▢Heerkulbeegga Jikada (ama sous vide)
Ukuntaada dhig digsiga (waxaad isticmaali kartaa inta aad rabto inta ay hal lakab ku jiraan oo aan la is dulsaarin)
Ku dar biyo kugu filan si aad ukuntaada ugu daboosho 1 '. KA SOO DHIIB DHIIGAHAaga INTA AADAN kulUULIN BIYAHA.
Heerkulbeeggaaga geli biyaha oo bilow kuleylka biyaha ilaa 140ºF. Ku hagaaji kuleylka sida lagama maarmaanka u ah si loo hubiyo in biyuhu aysan ka kululayn 142ºF.
Ukuntaada ku darso biyaha oo sii wad daawashada heerkulka si aad u hubiso in kuleylka uusan kor u kacayn ama hoos u dhicin.
Saddex daqiiqo ka dib, ugxanta biyaha ka qaad qaaddo oo ku wareeji baaquli biyo qabow. Ha u qaboojiyaan 5 daqiiqo.
Qallaji ukuntaada isla markaana isticmaal isla markiiba ama ku kaydi qaboojiyaha sida aad ugu keydin laheyd ukunta kale.
Haddii aad leedahay Sous Vide, nidaamkani si aan caadi ahayn buu u fudud yahay sababta oo ah sous vide ayaa biyaha ku hayn doonta heerkulka saxda ah ee aad u baahan tahay. Si aad ukunta ugu daaqdo adoo isticmaalaya Sous Vide, heerkulka ka dhig 135ºF una oggolow inay wax kariyaan 75 daqiiqo. Heer-kulkaan hoose ayaa ka dhigaya borotiinka ukunta midab cad inuu sii ahaado waqtiga dheereynta ee dheerna wuxuu sii yareeyaa halista cudurada. Halista in laga helo salmonella ugxanta ceyriin waa qiyaastii 1dii kun 20,000. Tani maahan hab 100% la hubo oo looga saarayo dhammaan halista cudurada, laakiin haddii sida saxda ah loo sameeyo waxay yaraynaysaa halista.
U adeegida:1ukunta|Kalori:72kcal(4%)|Kaarboohaydraytyada:1g|Protein:6g(12%)|Dufan:5g(8%)|Dufan Dufan:labag(10%)|Kalastarol:186mg(62%)|Sodium:83mg(3%)|Kaliumperyamper:69mg(laba%)|Sonkor:1g(1%)|Vitamin A:270IU(5%)|Kaalshiyam:35mg(4%)|Bir:1mg(6%)
waa carmelo iyo lala wali waa guursaday
waa kourtney kardashian ku soo laabtay scott
miyuu lil wayne qoraa heesahiisa